Maweydo candhadii, dhoollaha marisee, aan maallo hasheenna, Maandeeq…
Hashii, erayadaa loogu heesay, halkee ku dambeysay?!.
Cisiga aan ku qabay
Alla Caawa miyaan
Cidladaa ka joogaa?!”
Ruuxaas ma ah Ciraaqi, mana aha Afqaani, waa Soomaali!, erayadiisa dad badan waxay u qaadan karaan calaacal, mase aha oo aragtidayda waa guubaabo. Cidla’ inaan joogno kolkaan ogolaanno, waa laga rajo qabi karaa in aan ka fakarro sidaan rafaadka uga ruqaansan lahayn. Dantaada oo aad ka gaabsato ama aad ka xishoot ayaa wax walba ka liita. Ilbaxnimo ama rag ka rooni ma aha, waqtiga in aad ku lumiso; Album (Cajal hees) cusub ayaa soo baxay, Arsenal ayaa Barcelona ka badisay iyo Jaadkii ma soo dhacay?!. Soomaalidu hore waxay u tiri;“tiisa daryeelaa tu kale ku dara”.
Haddaba, intaan noollahay marun waa inaan dhab u wada hadallo, oo dooddu fadhi-ku-dirir iyo middi-middi ku tag ka sare marto. Qabiil soomaali ah oo qabiil kale oo soomaali ah muquuniya la waa!, xeerada salkeedana la soo wada taabtay, sidoo kale; mudnaan iyo laandheeri nimo waqtigeedi waa tagay oo, ruuxa Ak47 garabka u suranyahay ayaa laandheere ah, wuxuu doonana yeeli kara!. Nasiib darro, geedkii soomaali hoos harsan jirtay oo colaad daba-dheeraatay caleentii saarrayd in badan ka daadisay, ayaa rag gudimmo xiiraya loo soo dhiibay oo dhaqdhaq yar jeebka loogu soo shubay geesogaraacid ku bilaabeen. Raggaa waxaa la soo faray wax kasta, xataa salaadda – waaba, hadday tukadaan- in ay ka hor mariyaan, xididdo siibka geedka.
16-kii sano oo warmaha la iska asladay, xanuunkeedi oo aan la illoobin Karin raad raaca; gaboodfalkii, barakicintii iyo xasuuqii dhacay; waa howl hor taal “hay’adaha xuquuqda aadanaha u dooda”, kol dhaw waxaa la arki doonaa eedaysane yaashii oo gorodda laalaadinaya kana soo jeeda moorada eedaynta. Dhiigga dadku sidiisaba, duudsi ma galo, gacmaha dambiiluhuna ma mayrmaan ilaa laga jaaseeyo danbiguu galay, cadaab uu ku waarana waa waxa u sii yaal aakhiro.
Maanta waxa socda isdil soomaali dhexdeeda ah oo qura ma aha, waa duullaan (occupation) xabashi, ujeeddada ka dambaysaana tahay; dhulballaarsi iyo gumayn shacbiga soomaaliyeed. Runtii, xabashi baroor been ah waxay taageero kaga heshay dalal carab & muslim ah iyo kuwo aan ahayn intaba.Taniyo 1996-kii maalinba waxay geed foodda soo saarto, 26/12/2006-dii xabashi wajigeedi runta ahaa ayay marada ka qaadday. Been-hawaasayn saxan dahab ah lugu sido oo xabashi iyo duullaan ma dhicin afka loogu tiray waxa loogu yeero (DFKS) oo si kalana u ah (Dadka faraha ka-baxshay Soomaaliya) weeye waxa u baahan; dood wax dhisid ah, dhiidhi loo dhanyahay iyo halgan mood iyo noolba la huro.
Sidaydaba, xabashi lama yaabbani, waayo, nin baa lugu yiri: “hebeloow; hebel ayaa ku caayayay”. Ninkii ma caroon ma caytamin mana islurin si fudud ayuu ugu jawaabay; “oo muxuu iga caayi waaba dagaal sannahay e’ ”!. Xabashi waa horor aan dagaalsannahay, qaadan waaguse waa midka soomaali ila sheegta oo xabashiga ku daaban. Alleylehe; “waxaa hoogay kan lugu daaban yahay iyo kan ku daaban”!. Maanta dooddu waqti ahaan waa wixii ka dambeeyay 26/12/2006 oo maanta sanad buuxsamay, 10-an cisho oo sannadkii labaad ah tagtay, meeshuna waa dalkii soomaaliya oo xabashi gacanta loo galiyay.
Hor iyo horraan, mowduuca oo ballaaran darti, qoraalka in aan qodobeeyo si akhristaha ay ugu fududaato, fahamka waxa ka socda soomaaliya, waxaan u arkay lagama maarmaan, sidaa darteed:
Qodobka 1-aad: Xabashi damaceeda, maxaa sal u ah, yaase soo riixaya?.
Waydiintaa inta aanan ka jawaabin, bal aan dulmar uruursan ku maro taariikhda xabashida, inkastoon ka afeefanayo cilmiga taariikhdu in uu yahay maaddo takhasus gaar ah u baahan, maantana loo tafaxaytay ardada soomaaliyeed in laga duwo barashada maddada taariikhda, halka ardada xabashida loo baro taariikhda in ay ku faanaan. Haddaba, xusuusta akhristaha waxaan ku godlinayaa sadarradan gaaban:
Ugu horrayn, suugaantii hore oo Carbeed Itoobiya waxay u tiqiin; (Alxabashah), soomaaliduse waxay u taqaan; xabashi, amxaaro, itoobiya ama qandhicillay. Xabashi waligeed, marka laga reebo xilliyadii Mingiste iyo Zannaawi, waxaa ka talin jiray boqorro; barkaddo dhiig ah ku dhex noolaa oo, dhul ballaarsi iyo xasuuqa dadka dalalka ay qabsadaan lagu ibtileeyay. Xilligii gumaysigii reer Yurub Xabashidu madax bannaanideeda way ilaalshatay waqtiyo gaaban mooyee. Arrintaa waxaa sabab u ahaa gumaysigii reer Yurub (1884-1885) oo wax qaybsigii saami uga ogolaaday, diinta ay wadaagaan awgeed (Kirishtan). Sannakii 1936 ciidamadii Talyaanigu waxay jiireen Itoobiya. Ciidanka Ingiriiska iyo kuwii Itoobiya waxay 1941 jabiyeen ciidamadii Talyaaniga, ha yeeshee Itoobiya madax bannaani ma helin ilaa laga saxiixo heshiiskii Ingiriiska iyo Itoobiya dhexmaray 1944-kii. Xabashidu Qinigii 7aad dhalashadii Nabi Ciise (CS) ka hor waxay dhisatay boqortooyadii Aksum oo Badda-cas ku sii jeedday (halka Eretriya ku taal). Qarnigii 4aad Miilaadiga bartamihiisa Boqorkii “Ezana” wuxuu u wareegay Masiixiyadda (Christianity) wuxuuna ku xirmay kaniisaddii Kobtiga oo Masar. Qarnigii 7aad ee Miilaadiga, gacan ku haynta Badda-cas waxaa la wareegay Muslimka, Aksumna waxaa faraheeda ka baxay ganacsigii iyo xiriirkii badda cas. Boqortooyadii Aksum waxay baaba’day Qarnigii 10aad ee miiladiga. Buuraha Itoobiya Qarnigii 8-aad Miilaadiga waxaa ka dhismay boqortooyadii Itoobiya oo taxnayd taniyo 1974-kii Xayle Sallaasena ugu dambeeyay. Erayga Itoobiya micne ahaan;”waa kii wajiga gubnaa”. Xabashi waa meeshii ugu horraysay oo muslimiin soo dhawaysa markii ugu horraysay oo ay ka haajiraan Maka. Inkastoo xilligii Nabigu (SSC) noolaa uu wanaagsanaa xiriirka xabashida iyo muslimku, haddana isku dac ayaa bilowday xilligii Cumar Binul Khadhaab. Waxaa la xusuustaa in dakadda Jeddah weerar ay ku soo qaadeen xabashidu, muslimkuna iska caabiyay duullamadaa. Taariikhdu waxay xustaa damac fara badan oo boqorraadii xabashida kirishtanka ah ay ku doonayaan xukunkooda in ay ku gaarsiiyaan dhulalkii ay xukumeen boqorrada Muslimka ah, si ay faraha ugu dhigaan Geeska Afrika oo xeebihiisa uu maro ganacsiga caalamiga ah. Boqoraddii “Helaana” sannadkii 1510-kii waxay ergay u dirsatay “Amanuweel” boqorkii Burtuqaal, ujeedadeedu waxay ahayd in si wada jir ah ay u weeraraan xoogaggii islaamiga ahaa ee carrada ka jiray xilligaa, waxay kale oo doonaysay Maka (Kacbada) in ay ku weerarto ciidanka badda oo boqortooyada Burtuqaal oo guulo la taaban karo ka soo hoyiyay jabinta ciidanka badda ee Muslimiinta. Burtuqaal waa ogolaatay codsigii waxayna soo dirtay ciidan uu madax ka yahay Fasko Dagaama wiil uu dhalay. Ciidankii Burtuqaal waa la jabiyay taliyihiina waa la dilay, iskastoo doomihii muslimiintu aysan guul xoog leh ka keenin jabinta xabashi iyo ciidankii u soo hiilliyay.
Taariikhda dhul ballaarsiga oo Menelik-gii II aabaha u ahaa waxay ka soo bilaabataa:
1818:1868- Lij Kasa oo weerarro ku qabtay dhulka Amhara, Goojaam,Tigray iyo Shawa
1872- Duq Tigraanya waxaa noqday; Yohannes IV.
1889-Yohannes-kii IVaad, markii lagu dalay dagaalkii uu la galay dhaqdhaqaaqii Mahdigii Suudaan, waxaa taladii la wareegay boqorkii Shawa (shoa) kaas oo markii dambe noqday Menelik-gii IIaad.
1897-Menelik-gii IIaad wuxuu Addis Ababa ku saxiixay heshiiskii Anglo-Ethiopia oo gacanta loogu galiyay Haud (ogaadeenya qaar ka mid ah).
1913-Melnelik-gii IIaad waa dhintay waxaana la wareegay boqor tooyadii wiilkiisi curad; Lij Iyaasu, waase laga tuuray boqornimadii, tuhun ah; in uu muslimiinta gacan saar la lee yahay. Boqortooyadii waxaa loo caleema saaray gabar Menelik dhalay, waxaana talada u sii hayay Ras Tafari Mokonnen.
1930-Zawditu, waa dhimatay waxaana taladii la wareegay Ras Tafari Mokonnen oo la baxay Boqor Haile Sallassie-hii I-aad.
1954- London Ingiriiska iyo Itoobiya waxay ku kala saxiixdeen heshiis si buuxda Hawd iyo Riseef Eereya, Haile Sallassie gacanta loogu galinayo.
1963-Addis Ababa waxaa laga furay shirkii u horreeyay oo (OAU-da) waxaana la kala saxiixay heshiiskii xuduudaha Afrika, ha yeeshee soomaliya ma saxiixin.
1964-Diidmada soomaaliya saxiiska heshiiska waxay xukuumaddii xabashida ku kalliftay in ay weerar, kaga soo tallaabaan xadbeenaadkii, waxaana dhacay dagaalkii Ina-gooxa iyo Dabagoryaale, si geesinnimo leh ayaa weerarkii gaashaanka loogu daruuray.
1974-Waxaa kursigii boqorti nimada oo uu ku fadhiyay 40 sano fadhiya laga tuuray Haile Sallasihii I-aad, waxaana inqilaabay, Ammaan Andoom iyo Taferre Bente oo uu laayay kol dambe Korneel Mingeste. Lafhii Haile Sillasesie waxaa waqti dambe laga soo saaray musqul Qasriyadiisi midkood ku taal hoosti.
1977-Jamhuuriyaddii D. Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhex qarxay dagaalkii 77-kii, oo lagu xoreeyay Soomaali Galbeed (Ogadeenya) inteeda badan, waxaase Xooggi Dalka Soomaaliyeed dib loo soo riixay kolkii ay soo hiilliyeen Midowgii Soofiyeeti, Kuuba iyo Yaman.
1982-Ciidan xabashi ah oo ay garwadeen u tahasy jabhaddii SODAF waxay calanka xabashi ka taageen Goldogob iyo Balamballe.
1991-Waxaa Itoobiyadii Hantiwadaagga sheegatay kursigeedi madaxti nimada oo uu ku fadhiyay Mingisto Haile Maryam waxaa tuuray Jabhaddii EPRDF oo Meles Zannaawi iyo saaxibadi hor kacayeen.
1996-Ciidammo xabashi ah ayaa Gobolka Gedo soo galay iyaga oo marmarsiyo ka dhigtay; waxaan daba joognaa xubnno ka tirsan Alitixaad Alislaami oo qaraxyo ka gaystay gudaha Itoobiya, xeryo tababarra ka furay baro ku yaal agagaarada xuduudda labada dal.
2006-Ciidammo xabashi ah oo waqti hore loo gacan haadiyay oo lugu soo uruuriyay Baydhabo iyo Gobolka Hiiraan oo Taangiyo, Gawaarida Gaashaaman iyo ciidan lug ah isugu jira waxay u soo gurguurteen Muqdishow caasimaddii soomaaliya. Sida, Ido dhanaan u jeellan, askartii xabashidu iyaga oo, sidii u raran waxay isa-sii-taageen xeebta Liido (Bad waynta Hindiya) maalinkii 26/12 oo ku addan maalinka dunida kirishtanka ah ay u dabaal dagaan dhalashadii Nabi Ciise (CS). Qamaankii askarta xabashidu, wuxuu xasilay kolkay biyaha dhanaan oo badda dhawr cantuugo ka liqeen (darmadeen). Ha yeeshee madax xanuunkii iyo dhafarkii wuxuu soo rogaal celiyay kolkii dhawr habayn dabadood, xeryihii ay dageen lagu miray oo dhan walba looga soo daatay. Teer iyo habaynkaa askari xabashi ah oo xamar soo galay hurdo macaan ma ladin, khuuro tiis ahna lama maqal!, lamana maqli doono inta cagihiisa najaasada ah ay saran yihiin ciidda soomaaliyeed oo daahirka ah.
Sidaa hadday u soo taxnayd silsiladda taariikhda xabashidu, maxaan ganactogaalayn kagala soo dhex bixi karraa hayaanka dheer oo nacaybka iyo damaca ku dhisna ee xabashida?. “Madaxa meel ka sarraysa oo la salaaxu ma jiro” 100 iyo sgaal sano sano 2006-1897 oo taariikhda dhaw oo Itoobiya ka mid ah –waa taariikh raadkeedi qoyanyahay- maalinba waxay geed soo fariisto aakhirkii ciidankoodu wuxuu ka haw galay xaafadaha xamar isga oo xaruntii Wasaaraddii Gaashaandhigga soomaaliya xarun duullamadiisa uu ka qaado ka dhigtay.
Qarniyo fara badan, haddaan xabashi daris ahayn oo waydiinta sare ka jawaab is-iraahdo waxaan oron karaa; damaca xabashi oo joogto ah waxaa shidaal ay ku dhaqaajiso u aha dhulballarsi, nacayb diineed iyo helitaan dakad (bad) ay ka fuliso xiriiradeed ganacsiga caalamiga ah oo, ay si dhammaystiran uga taliso, waxay doondoonaysaa badalkii dakadihii Masawac iyo Casaba oo asy xaaranta ku haysatay!..
Wixii maanta ka horreeyay xabashi waxaa gadaal ka soo riixi jiray damaceeda, hiilka dowlado aan Geeska Afrika ka tirtsanayn oo diin ay ugu habarwacato iyo qaar hantiwadaag ay la hoos cararto. Xujadeedu mar waxay ahayd; waxaan nahay koox yar oo kirishtan ah oo, bad muslim ihi hareeraysay, marra waxay ahayd waxaan nahay; bulso hantiwadaag ah oo kacdoon dadwayne ku tuurtay Boqortooyo dulmi badan iyo koox dhulgoosato ah oo shacbi lixdan milyan sare u dhaafay dhiiggooda ku noolayd muddo qarniyo ah, marra; waxaa nagu soo fidaya dab ay shideen argagixiso caalami ah iyo wadaaddo seef labbood ah oo isreeb-reebkii soomaaliya ka soo dhex baxay.
Nasiib darro, wixii ka dambeeyay calankii xabashi looga taagay; Goldogob iyo Balamballe 1982-dii, xabashi indhahaa u dillacay oo waxay ogaatay in ay heli karto dad soomaali ah oo, hangaaban oo ay ku edeegato. Xabashidu xilli ay joogtaba, marra ma waayin marmarsiyo beerdulucsi ku dhisan oo ay labisto, dad ay maskaxda ka xaddo oo soomaali ah iyo kooxo lobbyist (loobiisti) ah oo aan afka ka dhigin waxa ay rabto. Boqorraddii hore oo itoobiya iyaga oo faraha ku dhigay gobollo fara badan oo dhanka uurka Afrika (gudaha) ah, haddana mar walba indhaheedu kama libiqsan xagga ay jiraan Badwaynta Hindiya iyo Badda cas, dhagahoodana kama bixin hugunka hirarka badda!, jirkooduna kama bogan tabidda, dabaysha diirran oo guudka sare oo badda soo marta.
Qodobka 2-aad: Xabashi, gudaha soomaaliya, Yaa ka taageera?!.
Damaca isballaarinta xabashida oo soo jireen ah, waaga ka hor taageero kama dhexhelin gudaha Soomaaliya. Wardoonka xabashida oo ay soo tababartay “Muusaadda Israa’iil” oo gudaha soomaaliya xog uruurin loo soo galiyay, mid mid soomaali ah oo la shaqeeya iyo ruux dambi galay oo xadka tillaabay, kolka laga reebo: “xisbigii Liibaraale” oo uu madaxda ka ahaa “Xaaji Baraako” oo u ololeeyay xilligii gobanimadoonka lagu jiray in la “mataaneeyo Muqdishow iyo Addis Ababa”, fallaagadii “Koofiyad Dhuub” oo uu abaabulay; Daqarre Jaamac Guuleed Cirroobe, oo ka kacday gobolkii hore loo oran jiray Mudug qaybtiisa Galguduud, ururakii SODAF oo mar dambe la baxay SSDF, ururadii SNM, USC iyo SPM oo Dirirdhabe Mingiste heshiiska saddex geesoodka ah uga saxiixay (heshiikaa xabashi wuxuu u ogolaa dakadaha soomaaliya in ay isticmaasho shuruud la’aan) iyo xilligii dagaalka sokeeye socday ururadii daacadda mooday hiilka Xabashi, sida SNF-tii gobolka Gedo iyo RRA-dii gobolka Bay, marka dhinac la mariyo, marra xabashi dad u adeega kuma dhex yeelan gudaha soomaaliya inta la xusuusto.
Taliska “Addis Ababa” burburkii dawladdii dhexe wixii ka soo haray isaga oo hunguriyaynaya caalkamka wuxuu isu tusaya; “Baraar yar oo warmooge ah”; inuu yahay. Durba wuxuu qalqaaliyay xarunta “OAU-da” in siyaasiyiin soomaali ah lagu soo uruuriyo si ay uga xaajoodaan dib-u-heshiisiin dhexdooda ah. Muraadka, dhabta ahse, wuxuu ahaa in uu ka naqaysto (xusho) kooxdii uu u tababari lahaa qabsashada soomaaliya. Ugu dambayn Addis Ababa waa heshay raggeedi oo waa wixii ay u baxisay SRRC oo Sodare lagu dhisay laguna burburiyay dawladdii, barlamaankii iyo madaxwaynihii Carta/Jabuuti lagu soo dhisay. Xulkoodi weeye waxa dawladda iyo barlamaanka maanta laga dhisay Empagathina lagu soo uruuriyay. Siyaasiyiin qashin u badan oo meelo kala duwan laga soo uruuriyay ma aysan garan, meesha in dabin yaal –intii garatayna waa aamustay- Hotel Giyoon-na uu yahay saylad xoolaha lagu faasaxo “Doqon ma waaye” oo kale .
Hawshaa muddo dabadeed, waxaa ka dhashay saddex koox oo, mid waliba mashruuca “Addis Ababa” si u taageerto, haba kala dadaal duwanaadaan ama kala ujeeddo leexsanaadeene, waana kowan:
Kooxda koowaad: waa dad wax ma garato u badan (dadwayne) oo aan wax dan ah oo la taaban karo mashruuca ku lahayn, aamusnaan tooda ayaa ah astaan ogolaasho iyo koox qabyaalad indhaha ka tuurtay oo, nin reerkooda ah oo kursi hoosta ka maran ku fadhiya hadday arkaan burura (jadbooda) wax walbana intaa ayaa uga door roon, caqligoodu 4.5 maxaan ku hellay ma dhaafsana.
Kooxda labaad: waa koox lacagtii ummadda wax ku baratay iyo koox dalka jagooyin sare ka soo qabtay oo dasnaystayaal ah “safka shanaad”, oo tacab iyo darajo jacayl lugu fidneeyay. Wax ay ka xishoodaan lama arko oo, xataa, midkii loo magacaabo safiirka soomaaliya u fhidhiya “Siberia” Saaybeeriya, isma waydiiyo; “waa maxay maslaxadda soomaali ka Taal “Siberia”?, qabowgeeda ba’an sidee ugu noolaan kartaa?!, isagu waa ina halkaa (dhuunta)!.
Kooxda saddexaad: Kooxdani waa mid soomaali inkaarteedu ku dhacday oo, wax la arko ama la maqlo ugu kharriban, waa tiir-dhexaadka ama aaladda rogta (mechian) hindisaha xabashida oo idil. Raggaani, tababar culus oo maal iyo waqtiba loo huray bay soo qaateen, maskax doodana si fiican ayaa loo soo xalay (Brain washed) , dhiiggii soomaali nimadana waa laga daadshay, qaab ay adagtahay in la fahmo ayay u qafalmardaxan yihiin (Blackmailed). His-qabo, sidii loo yiri dibba ma aysan soo eegin. Kooxdan astaamaheeda iyo baxaalligeeda wax laga dhammaan karo ma aha, haddaan u gal maagana, waa in aan helo maktabad lagu keydsho (liberery) buugtii laga qoro oo qurah, sidoo kale, liiska magacyadu waa dheeryahay, sidaa awgeed, waxaan soo xulay dhowr qof oo tusaale ku filan:
1-Cabdullaahi Yuusuf: waa maareeyaha mashruuca. Ninkan odaga ah waxaa la ogaaday in uu aad u caashaqay; “Madaxwayne mar in la yiirhdo”, sidaa darteed, sidii loo waday waxaa lagu fariisiyay kursi Madaxwayne”. Maalinkii la dhaarshay maantii xigtay, wuxuu dalbaday ciidan 20,000 oo askari dhan in caalamku degdeg ula soo gaaro. Geed dheer iyo geed gaaban kolkuu codsigaa u fuulay, cid u soo dhaqaaqdana ka quustay, ayuu codsi qoraal ah hordhigay taliska “Addis Ababa” oo horay kala soo orday ciidan meel dhaw fadhiyay oo, tiro ahaan dhan 60.000 askari, saddex jibaar ciidankuu dalbay oo hub fudud iyo hub culus afka ka jooga. Ciidankii hawshii wali waa u socotaa., waase shiddaysan yahay!.
2-Geeddi iyo Nuur-cadde: labadan axad waa (pay one take two) mid bixi laba qaado, ama xarar iyo madax (Dul iyo daabac), waxaa la qaybsiiyay inkiraadda qaddiyadda soomaali galbeed “Ogaadeenya” iyo xamar waxaa dadka ku laaya oo burburiyay waa muqaawamada. Hammigooda oo idil waa lacag jeebka lagu shubto, Hoteel shan xiddigood ah oo la dago, diyaarad la sii raaco oo la soo raaco iyo marka dambe oo, CV-ga (taariikh nololeedkooda) lagu qorto; “waxaan soo noqday ra’iisul wasaare soomaaliya”!.
3-Shiikh Madoobe: waa kutubo-xoor indho la’ oo wuxuu arko ciidan xabashi ugu dambeeyay, haddii la waydiiyo Maraykan ma taqaan?, “wuxuu oran; “Itoobiya, intee ka le-eg yahay?”. Waa gartiisoo; ciidan uu arko midkii xabashida oo SNA Baydhabo ka saaray ayaa ugu xoog badaa. Indhooluhu ma wuusan arag “Xooggii Dalka Soomaaliyeed” oo 70-dii jooga!.
4-Buubaa: naynaastiisa ayaa tilmaan ugu filan. Bal, maxaad ka fili kartaa nin wayn oo; Buubaa loogu yeeray oo; “heeh yiri?!. Ninkani, soo ma aha ninkii M.I.Ciqaal (AUN) kolkuu biilkiisa xajin kari waayay, ku yiri: “wiilyahow, wax ku deeqa ma heli karee, meelahaa u xoogsi tag!”, waxba yoosan soomaali isu keenine meel kale masruuf ha ka doonto!.
5-Maxamed Dheere: isagu waa, webpage-ka abaaqaroow oo la qofeeyay (personificeted). Waa caalle iska waynaaday oo markuu jawaan Jaad ah daaqo wixii maskaxdiisa yarta ah ku soo dhaca yiraahda, sida: “Bukaaraha waxaa duqeeyay, niman afka soo duubtay oo cad-cad oo, ajnabi ah. Gobollada oo dhan Amxaartu waa joogtaa, ee xay ba’sheenoo xamar looga saaraa?!”. Tollow, Shaanshida xamar-wayne iyo Carabta Bilaajo ma ajnabiga ayuu ku tiriyaa?!. Dhanka kale, ma isaga ayay la dhasheen xabshida Falaashada ah oo, xaafadaha Kaaraan iyo Maanaboolyo la dhexmara koofi gabbal ah oo ay dhakada saartaan Yuhuuddu?, mise aragtidiisa, xabashi dalkay wax ku lee dahay?!. Wanaagiisu, waa in; wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Wasaaradda Warfaafinta Itoobiya ay ka soo xigteen;“Bakaarha waxaa duqeeyay nimanka Muqaawamada sheegta”.
6-Ina Shaaweey:Gabankan waxaa lagu barbaariyay dil iyo dhac, aabbihi wuxuu ahaa qab-qablle dagaal, iyadii oo dhaxal ugu soo meertay weeye sababta markuu arko Baambayda (kooxda Miyuusigga) xabashida oo, heesta calanka ciyaaraysa u ruuxmo, sida ruux; Maamme iyo Yoose (Mingis) laga tumayo. Kalgacal aan la qiyaasi karin ayuu gabanku xabshi u qabaa!, sababta, lama yaqaan!. Warkii afkiisa soo dhaafa waa; “duleedka magaalada xamar ayaa dagaalku ka socdaa”!.
7-Ina As-hari: ninkan oo xurmada magaca uu sito aan qaadi karin, wuxuu gaaray isku mid in uu ka dhigo socdaal (immigration ama hijra) iyo duullaan (occupation). Bishii April /10/ 2007 barnaamijka “Al-itijaah Almucaakis” oo Aljazeera tabiso, waxaa dood xiiso badan oo aad u kulul ku dhexmartay Sakariya Maxamuud oo xildhibeen Barlamaanka xorta ah, isla markaana ah guddoomiye ku xigeenka isbahaysiga dib-u-xoraynta soomaaliya iyo ninkan oo, hadalkiisu madaxa dhul la dhac iyo xag-xagasho ku koobnaa, waxaan ka soo qaatay dhowrkan sadar:“Qaanuunka caalamiga ah wuxuu sheegaa laba iskaashi, mid wuxuu oranayaa; haddii dowlad dareento xisillooni darro ama cabsi waa u yeeran kartaa ciidan shisheeye”…“Falluuja iyo Malluuja wax la yiraahdo kama jiraan xamar”…“Muqdishoow muqaawama iyo Maxkamad Islaami ah ma joogaan, waa dad ka yimid; Alqaacida, Afganistaan iyo Shiishaan”…Cabdullaahi Yuusuf waa in adeerkay, Cabdirashiid C. Sharmaarkana (AUN) gabadhiisa ayaan qabaa!...Xabashida maanta joogtaa waxay la mid tahay; tii Nabigeennu (SSC) uu yiri u haajira (socdaala), kolkii cadaadiska Quraysh ay u adkaysan kari waayeen. Meles Zanaawi wuxuu ka soo daahiray qabrigii Nagaashi-gii, nabigu (SSC) ku takaday saaltul jinaasa isaga oo maqan”.
Ma iswaydiiyay; xabashi ma iyadaa nagu soo duushay, mise annaga ayaa u socdaallay (hijroonnay) kolkaan dhibta dhexdeenna ah u adkaysan kari waynnay?, been soo halkaa kuma jirto?1, cawro waa isagee, safiirku aqoon gaabanaa, ma sidaa ayuu la-taliye ku yahay?!.
Hormadan, Meles Zanaawi markuu qaaq yiraahdo; meerisyada kaliya oo ay ku celceliyaan waa; “aaheey, waa saas, runtiis”. Raggaas waa tusaale yar oo aan ka soo qaatay dhowr kadin oo, loo adeegsaday qabsashada soomaaliya. Qoladan qaabka loo maray qabsashada soomaaliya looma sheegin wax kulayl ahna kuma hayso, balse, dalal badan oo Carab iyo Muslimba leh; waxaa lagu qanciyay waraaq; ruux soomaali ah oo arkay uusan jirin, oo la yiri: “waxay ka soo baxday xafiiska madaxwaynaha ama wasiirka koowaad midkood iyo go’aankii barlamaanka oo tafsiirkii uu lahaa la garab mariyay. Kooxdaa waxaa la galiyay Jib (Gib) ay ku duubantahay; “soomaaliya waxaa joogta; “Alqaacida iyo ururro argagixiso ah oo ajnabi iyo soomaaliba leh”. La-isma waydiin; dadkii dalka u dhashay haddii la barakiciyay, side, shisheeye kaligi ugu dhex noolaan karaan xaafado burburay, oo cidla’ ah, oo mukulaalihii (bisadihii) ku haray gaajo laysay!. Horta, ciidanka xabashidu ma sokeeye aan wada dhalannay baa?, xishood, haddii laga tago oo, haah, jawaabtu noqoto!, qabiilkee galaan?, meeyana hilbihii ay ku lahaayeen 4.5-ka?, yaase u qaaday?!.
Soomaaliya ma laha dhismayaal badan oo dhaadheer oo lugu dhuunto iyo xaafado aan war isu hayn, sida “London iyo New york”, iyada oo dhammi waa afar cariish iyo dhawr guri oo 13x13-she ah oo dadka dagaa isyaqaan!. Xadiithkii Nabigeenna suuban (ssc) oo ahaa; “dariskaagu waa afartan guri oo dhan walba ah” ku dhaqankiisa ayaa si quman isu baray.
Hadalba ha yaraadee, ma la shaaciyo qalabk samada wax ka soo eeg (satellites) ee basaasidda sawirrada ku kaydsan?!, soo tii la yiri xabbad sigaar ah oo dhulka taal waa arkaa!, ma wuxuu qalabku sawiri la’yaha midka afka duubtay oo meel suryo (luuq) ah hoobiye ka soo ridaya?. Si le-eg soomaliya ma laha Buuraha Toora-boora oo kale, mana ah dhul kaymo waawayn leh sida dalalka dhaca dhulbaraha (Equaiter-ka), inta badan, waa lamadagaan, meelo kooban oo dhir gaagaaban (savanna) leh marka laga reebo!.
Qodobka 3-aad: Iska cabinta xabashida (muqaawamada, resistance) ma garbaa?.
Arrintu gar iyo gar la’aan ma joogto oo, waa amar, amarra waajib ayaa daba yaal waajibnna waa in laga soo dhalaalo, halkaa khiyaar kama furra. Kutubta samaawiga ah, qawaaniinta aadanuhu dhigto iyo jaartarka Qaramada Midoobay, midkoodnna qori mayo; dalkii lagu soo duulo in uu gacmaha sare u taago, garaad aqbalaana ma jiro. Ma diimooqaraadiyad baa, in xukuumaddu dalka ku soo hoggaamiso cadaw, colaadda uu soomaaliya u qabo kutubta taariikhdu wax badan ka qortay?, mise waa; “la jiifiyaana bannaan”. Haatan, haddii ciidan soomaali ah “Addis Ababa” galo oo xaafadaha u qaybiyo xabbado BM iyo Taangi, bulshada caalamku ma aamusnaan?!. Waxa socda soo ma aha (Alkaylu bi mikyaalayn) laba miisaan arrin mid ah in lagu kala beego. Sidaas ayaan u garannay waxa maanta Geeska Afrika ka socda, hase yeeshee talo la’aanay ba’!. Dunidan, cadaaladdu gabaabsi ka sii tahay in aan ka sugnno garsoor, waa doqonimo midda ugu liidata, garra nalooguma laha.
Qodobka 4-aad: Gunaanad.
Soomaaliya waxay ku dambayn doonto (Alle) oo kaliya ayaa og, saadaashuse ma fiicna, haddaan si Alle kaligi ogyahay wax isu baddalin, quusinna igama aha. Laakin, casharada ugu wayn oo musiibada taagan aannu ka kororsannay waxaa ka mid ah; bulsho meel ku nool haddaysan hoggaan daacad ah oo toosan helin; in ay luntay oo, dayeer kasta xariga ku jiidanayo. Sidaa darteed; haddaan waynay ruug-caddaa taliya, miyaan waynay dhallinyaro dhiig leh oo halganta?!. Majaahidkii waynaa; Maxamad Cabdulle Xalane (AUN) dhaxalkii dhiiggiisa uu ugu qoray shacbiga soomaaliyeed waaye; waxa xabashi ay uga quusatay muddo 32 sano ah (1964-1996dii) in ay waydo meel ay ka soo gaadho xurmada masaajidda soomaaliyeed, sidoo kale ay waydo meel ay u soo marto kufsiga gabdho bikro ah oo soomaaliyeed.
Nin ayaa maxkamad la soo hor taagay iyada oo tuugo lagu eedaynayo, garsoorihii markuu eedayntii dhagaystay ayuu isaga oo aan caddayn iyo markhaati midna dalban, ninkii, xabsi iyo ganaax lacageed isu raaciyay. Waa la yaabay, dabadeed garsoorihii ayaa la waydiiyay:“oo cidnna ma aadan waraysan, caddaynna ma aadan raadine, maxaad ku xukuntay; ninku inuu tuug yahay oo ciqaab mudanyahay?!. Garsoorihii ma xanaaqin ismana lurin, wuxuu yiri: “anaa aqaan oo waa tuug mariyay oo madoobeeyay”. Kayn in la gubo waa danbi aan cafin lahayn, shacbi in la gumaadase waa arrin ka fiirsi leh. Bal orod oo kaymaha Kalifoorniya (California) laba geed oo ka mid ah gub, Wallee adiyo aabahaa in aad u naf waayaysaan!.
Haddaba, taniyo, kolkii xeradii Galbeedka iyo xeradii Barigu –Maraykan inta raacsan iyo Midowga Soofyeeti wixii la oran jiray inta raacsan- kala itaal roonaadeen oo, waliba midka dambe la muquuniyay, caalamka xeerka ka socdaa wuxuu ku soo uruuray; caqli ku salaysan labada tusaale oo aan sare ku sheegay. Soomaaliya oo ahamiyad istaraatiiji ah iyo khayraad dabiici ah leh, albaabada fidnadana iyadu gacanteeda ku furtay waxay noqotay dhul falan, waraabsan, bacrimaysan oo wixii lugu ridaaba laban-laab keena!.
Soomaalidu waxay tiraahdaa; “intii orod jiray kufid waa jirtay”. Waxaan ulajeedaa; “intii gumaysi jiray iska cabinna waa jirtay, hadday Yurub noqoto, Afrika noqoto ama Aasiya. Eraybixinta oo, caqiidada diiniga ah oo dadkaas rumaysan yahay, dhaqanka uu lee yahay, micnaha eraygu bixiyo, kala duwan ah ku timaadda mooyee bulsho meel ku wada nool oo rumaysan haddii la gumaysto in ay afka xirato edebnna meel u fariisto hore looma arag hadda ka dibnna la sugi mayo, soomaalina tii dhabbahaa jidaysa noqon mayso. Micne kala duwan sooma kordhiso kala duwanaanta eraybixintu. Haddaba, diinta, dadka iyo dalka xabashi in ay ku soo duushay, nin kasta oo soomaali ah waa ogyahay, sababta iska caabintana (muqaawamada) wuxuu u tirin karaa saddexdaa midkood; diinta, dadka ama dalka, ama saddexda oo uu meel isugu keenay, “biyo meel godan ayay isugu tagaan”. Caqliga san wuxuu qabaa xilligan oo kale, wax walba in loo jeheeyo saaridda ciidamada xabashida, daba-dhilifkoodana la raaciyo, wixii khilaaf ah oo yimaadaa waa maslaxadda gumausiga, adigu waxaad doonto ulajeedada ka dhigo. Muslim ilaahay baa naga dhigay oo meella ugama soconno. Alle kor ahaaye wuxuu yir;(Laqbaha) [Haddii la idinku dilo jidka Eebbe ama aad dhimataan, dambi dhaaf Eebbe iyo naxariistiisa ayaa idiinka khayr badan waxy kulmin (uruuriyeen)]. Aali-cimraan:157 Wuxuu kale oo yiri: (Laqbaha) [Adeeca Eebbe iyo Rasuulkiisa ha murmina yaan xooggiinu kala tagine samrra Eebbe wuxuu la jiraa kuwa samree] Al-Anfaal:46.
Isku-soo-xoori, oo waxa Maandeeq loo hilbeeyay, miniwaarro calammo kala jeeda ah surtay u afmeerayaan xeebaha soomaaliya, diyaarado joog sare ku lalaya cirka isugu jiireen, ma aha daryeel nala mihiibsiinayo, ama tuldo (geel) ah oo bulshada caalam ka soo baxsaday oo laga yaboohinayo soomaaliya ceelasheeda!. Balse, aragtidayda waxaa soomaaliya loo dabar goynayo oo xargahay hore u xirxiratay loo furfurayaa, waa afar arrin oo labo xabashi gaar u thay;
1- Dhul ballaarsi mar dambe isu rogi doona ilaaq ah; soomaali oo idil, meel ay ku nooshahayba (labadii gobol ee J.Soomaaliya (koofur iyo waqooyi), Jabuuti, NFD iyo Soomaali galbeed (ogaadeenya) waa hal qowmiyad oo ka mid ah qowmiyadaha Itoobiya daga, giddigoodnna waa kililka shanaad. Taliska Addis Ababa haddii uu arkay aragtidii soomaali wayn (the great Somalia) in la baylihiyay, waxaa damac ka galay burburkayaga in uu ka dul dhisto Itoobiyada Wayn (the great Ethiopia) oo bado leh, waana halka sartu ka quruntay.
2- Badwaynta hindiya iyo Badda cas oo ganacsiga caalamiga ah marin u ah, ahamiyad wayn u leh itoobiya, waligeedna ku taamaysay; in ay gacanteeda si fudud oo kharaj yar ku soo galaan.
3- Khayraadka dihin oo soomaaliy, mid dhulka hoostiisa ku aasan ama mid dhulka guudkiisa yaal oo soomaali xog iyo war qumman aysan ka hayn; in Maraykan iyo dalkii uu ka lug bixi waayo ceeriinka ku qaybsadaan, madax-is-haysiga soomaaliya fursadda ka bilatayna laga faa’iidaysto.
4- Cudur (jirro) nafsi ah oo la yiraahdo Islamafoobiya (islamophopia) oo dawladaha aan muslimka ahayn qaarkood qaadeen, waliba, wixii ka dambeeyay 11/09 aad u faafay in daawooyinka loo qoro (prescribtion-ka) buktadeeda ay ka mid noqotay; “soomaliya waxaa ka hawl gala kooxo argagixiso ah, waana gabbaad nabad u ah argaxisada caalamiga ah”. Dawlado Itoobiya u horrayso cudurkaa waa ku habsaday.
Nasiib darro, maanta oo wax walba la burburiyay, dadkii la xasuuqay, qax joogto ah la baday; hal qof, xataa, qof barki oo argagixiye ah lagama soo qaban gudaha soomaaliya. Guwantanaamo argagixiye soomaali ah lagama diiwaan galin inta aan ogahay, marka laga reebo rag dawladda Kenya ay Itoobiya u gacan galisay oo Guwantanaamada Itoobiya laga furay ku xiran. Meel kale oo aannan garan ayaa Salaaddu iska qabsan la’dahay. Soomaaliya argagixiso laga soo waa, ciddi ku farxi lahay iyo ciddii ka nixi la haydba!. Horta, argagixisadu ma makhluuq indhaha Maraykanka iyo xabashida oo kaliya arkaan baa?!. Ma dadqalatadii Dhagdheer, oo carruurta lagu cabsi galin jiray oo buuraha Xargaga lagu sheegi jiray baa?!.
Wax kasta oo la sheego ama dhaca, Maandeeq meella uma socoto, waa la khasbayaa mooyee…labada addin oo hore ayay mudatay iyda oo dhaawacan. Ma foga markay ku tuman lahayd Daaxuurka hoggankeeda loo dhiibay…Dhaawacyo hore oo far badan waa ka kabatay, dhaawaca maanta ahna “Eebbe” idanki way ka kaban.
Berlin, 1884-1885-tii markii soomaaliya gumaysigu ku qaybsaday oo, Ingiriis waqooyiga iyo NFD qaatay, Talyaanina Koofur qaatay, Faransiisna Jabuuti qaatay kol dambana, Itoobiya Ogaadeenya qaadatay, oo dib-u-soo noolaynta midnimadii soomaali warmaha loo tuntay; Yuusuf Xaaji Adan qabille (AUN),wuxuu tiriyay 40-tameeyadii hees ku fidday soomaali dhexdeeda, magaceeduna ahaa: Soomaaliyeey Toosoo. Heestaa oo hubkii gobanimada lagu soo dhiciyay ka mid noqotay, goobaha kulammada sida, xaruntii S.Y.L waxaa ka qaadi jiray; Qaasim Hilowle Iskiifo (AUN) isaga oo dhallinyarada horseedka ah; dhiiggooda ku dhaqaajinaya, waddaniyiinta oo idilla ugu yeeraya reenka codkiisi iyo diryaan xabeeb leh oo dhagaha u roon kana soo burqaday laabtiisa. Afarta meeris oo heestu ka bilaabato dhextaalkana u ah oo kaliya, haddaan fasirkooda isku dayo, waxaa oran lahaa:
Soomaali/yeey; shantii Soomaali oo aan kala sooc lahayneey. Toos/oo qummaati u socda oo, tubta saxa ah wada raaca oo, midba midka (adinka oo soomaali ah) kale tiir iyo garab u taagan ha noqdo. Mar walba dhammaantiin midka tabar daran (tabar darro waa wax nolosha ka md ehe) ha taageero. Sidaa waligiin u toosnaada isuna taageera
Hadba kiina taagdaran
Tuldo geela oo dhacan
Baad toogasho u badheedhaan
Ma dhulkan dhanee tagay
Ayaan ninna qori u tuurayn
Hadba waxaan la taahaa
Nin dalkiisii cadow tegay
U taag waayey baan ahay
Odayaasha kala tegay
Iyo tafaraaruqaa i dilee
Amxaar ima taseeyeen
Hadaydaan tog wada marin
Taladeenu meel noqon
Taabimayno calan wacan
Ugu dambayn, heestan; “xaal ha la siiyo, abwaankii curiyayna warasadiisa tacsi ha loo geeyo, waayo, marar fara badan ayaa, iyadoo laab been ah la isla dhacayo, illin tii yaxaaska oo kale ahna la qubayo lagu jiiday –luggooyay- goobo aysan gayin oo laga hor tiriyay rag aan mudnayn oo dibinnaha qaniina markaay ereyadeeda maqlaan, waa; raga Addis Ababa iyo Nairobi ku nool, madaxdana ka ah. Qoon wax ma garato u badan oo aan nuxurkeeda garan ayaa aftirtir iyo isbihin-bihin been ah u adeegsaday. Ardaashaa afkooda iyo uurkoodu abid ma wada-shaqayn!...Kuwaa ciribtooda dambe; Allaha ka digo kuwii mid mid foodda isu qabsada, oo heestaa cuqubadeedu ku dhacdo, aamiin dhaha.
Inkastoo, anba qaxooti aan ahay oo aanan waxba dhaamin dadka “Siinka dheer” ku rafaadssan, haddana heesta waxaan hawada u marinayaa; geesiyada gudaha –dalka- ka halgamaya iyo inta qaxooti nimada aan wadaagnno, ha yeeshee iga nasiib daran oo, geedaha hoostooda; gaajo iyo darxumo la daadsan, keneecadu dhiigga ka noogtay, galmigu indha ka tuuray oo, kufsi iyo dhac joogto ah lagala xishoon waayay. Waxaan isleeyahay ereyadaa ha ka dhigtaan maro (qayd) ay dhexda ku adkaystaan. Wax tar dhaqaale; in walwalka iyo murugada oo lala qaybsado loo dheeraysiiyo waa waajib meeshiisa ugu yar, waana rag ka rooni. Dhib kasta fudayd ayaa ka dambeeya Inshaa Allaah.
Garoowe. Masuuliyiinta Xisbiga Mucaaradka ah ee Ramaas RPP oo wada hadalo u bilaabmeen... Jan 7
Madax Mareykan ah iyo Isbahaysiga Dib u Xoreynta Soomaaliya oo shir ku yeeshay Casmara... Akhri... Jan 7
Wariyihii labaab oo ku xiran xabsiga magalada bosaaso
Waa sidee Xaaladda wadada isku xirta Boosaaso iyo Gaalkacyo- warbixin
Golaha Samafalka Iyo Horumarinta Bulshada oo Deeqo ay bixiyeen Shirkadda Dahabshiil iyo kuwa kale u qeybiyey dadka u barakacay duleedka Muqdisho
Nabaddoon Xasan Dhuqub oo Weli Ku Xiran Boosaaso... Jan 6
Gudiga Ganacsatada Islii oo Shir saxaafadeed ku qabtay Nairobi.. Jan 6
Sh. C/qaadir Nuur Faarax Oo La kulmay Ardayda Soomaliyeed Ee wax ka barta Malaysia... Jan 6
Warbixin- Maxaad ka ta qaan Magaalada Taariikhiga ah ee Laasqoray
Waxqabadka Ururka Naafada Soomaaliyeed:::
Isbahaysiga Dib-u-Xoraynta Soomaaliya oo Casmara Kula shiraya Wafti ka socda Maraykanka...
iyo Madaxwayne Isaias oo wadahadal la yeeshay US Congressman Donald Payne iyo C/laahi Yuusuf oo kusii jeeda London, UK... Akhri... Jan 5
Dagaallo ciidammada gumaysiga lagu jabiyay.